ပင်မစာမျက်နှာ ဥရောပဘောလုံးပြိုင်ပွဲ အီတလီဘောလုံးကစားသမားများ Stephan El Shaarawy ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
LB အကောင်းဆုံးအမည်ဝှက်ခြင်းဖြင့်လူသိများသူတစ်ဦးဘောလုံးပြိုင်ပွဲ Genius ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်; "ဖာ"။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Stephan El Shaarawy ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ရက်စွဲကိုမရောက်မှီတိုင်အောင်သူ၏ကလေးဘဝအချိန်ကနေသင်တို့ဆီသို့ထူးဆန်းသောဖြစ်ရပ်များတစ်ဦးအပြည့်အဝအကောင့်တတ်၏။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကျော်ကြားမှု, မိသားစုဘဝနှင့်များစွာသော OFF နှင့်သူ့ကိုအကြောင်းကို ON-အသံနည်းနည်း-လူသိများအချက်အလက်များရှေ့တော်၌မိမိဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိပါဝငျသညျ။
ဟုတ်ပါတယ်, လူတိုင်းကသူ့အရှိန်အဟုန်, dribble နှင့်သွက်လက်အကြောင်းကိုသိတယ်, ဒါပေမယ့်အနည်းငယ်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့သောငါတို့ Stephan El Shaarawy ရဲ့ဇီဝစဉ်းစားပါ။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ်ခွင့်ပန်ပြီးမှမရှိဘဲရဲ့ Begin ကြကုန်အံ့။
Stephan El Shaarawy ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ဘ0အစပိုင်း
Stephan Kareem El-Shaarawy Savona, အီတလီအတွက်အောက်တိုဘာလ 27 ၏ 1992th နေ့၌ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ သူကသူ့အီတလီမိခင်, Lucy ကိုအယ်လ် Shaarawy နှင့်ကြောင့်ကြမ်းတမ်းသောစီးပွားရေးအခြေအနေများအဲဂုတ္တုပြည် left နဲ့သူ့မိသားစုကိုစတင်ရန်အီတလီနိုင်ငံရွှေ့ပြောင်းသူကိုအီဂျစ်ဖခင် Sabri အယ်လ် Shaarawy မှမွေးဖွားခဲ့သည်။ အောက်တွင်နှစ်ဦးစလုံးမိဘများ၏ဓာတ်ပုံဖြစ်ပါသည်။
ရုံနဲ့တူ Edin Dzeko, Stephan တစ်ဦးအမည်ခံမွတ်စလင်အဖြစ်ကြီးပြင်းလာသူသည်မိမိအေးဂျင့်နဲ့ဘောလုံးကွင်းတစ်ခုကြီးတွေထောက်ခံသူဖြစ်ဖြစ်ပျက်သောမိမိတဦးတည်းနှင့်သာအစ်ကို Manuel Shaarawy နှင့်အတူကြီးပြင်းလာတယ်။
အဆန်းမဟုတ်ပါလျှင် Stephan ရဲ့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝပုံပြင်, စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါသည် - ကထူးခြားသောဘောလုံးအခွက်တဆယ်နှင့်ကိုယ်ကိုမင်္ဂလာကိုတွေ့ရှိခဲ့သူတစ်ဦးချစ်စရာကလေးလေး၏အကြောင်းပါပဲ။ တကယ်တော့သူ သူ့ရဲ့ကလေးဘဝရက်ပေါင်းကတည်းကဘောလုံး၏အိပ်မက်ကိုမြင်မက်။ ကလေးတစ်ဦးအဖြစ်, Stephan အများအပြားအားကစားကစားရန်အသုံးပြုခဲ့ပေမဲ့ပိုပြီးဘောလုံးတွဲခဲ့ပါတယ်။ သူကငါးကြိမ်ခြောက်ခဲ့သောအခါသူ၏မိဘများကသူ့ကို Legino, Savona အတွက်ကလပ် join ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ သူ 11 ခဲ့မရောက်မှီတိုင်အောင်, Stephan ရှိနေ၏။
တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးသမားဖြစ်လာအာရုံစိုက်နေသော်လည်း Stephan နေဆဲကသူ့မိခင်ကိုကျေးဇူးတင်လေ့လာနိုင်ခဲ့သည်။ သူကသူ့အတန်းအစားထိပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ့မိဘကသူတို့သားအောက်က ID ကိုတွင်တွေ့မြင်အဖြစ်သူ၏ပထမဦးဆုံးကလပ်များအတွက်မှတ်ပုံတင်မတိုင်မီကျောင်းမှအပြီးသတ်ခဲ့ကြောင်းသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။
သောကြောင့်ပညာရှင်များ၏, အယ်လ် Shaarawy အချိန်ပြည့်ဘောလုံးကွင်းတစ်နှောင်းပိုင်းတွင် starter ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူအတော်လေးနှောင်းပိုင်းတွင်တိုင်အောင်တဆယ်လေး၏အသက်အရွယ်မှာဂျီနိုအာနဲ့သူ့ရဲ့လူငယ်ကစားသမားဘစတင်ခဲ့သည်။ နှောင်းပိုင်းတွင်စတင်နေသော်လည်း Stephan မျှအချိန်အတွင်းပထမဦးဆုံးအသင်းသို့ဖဲ့သောသူ၏အားကစားအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှသဘောအရကြီးထွားကူညီပေးခဲ့သည်။ Kaka ၏ဗီဒီယိုများသည်သူ၏စံပြစောင့်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်, Stephan စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုမှဦးဆောင်သည့် Springboard တယ်။
Stephan El Shaarawy ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -Fame မှ Rising
အဖြစ်ဝေးဘောလုံးသက်ဆိုင်ရာခံခဲ့ရသည်အဖြစ်ပြုလုပ်သူသည်မိမိခြေထောက်ထက်သူ၏ဦးခေါင်းနှင့်အတူဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာအကြောင်းပိုမိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Stephan အခြေအနေများအနိုင်ရနှင့်ဆုံးရှုံးအားဖြင့်ခပ်သိမ်းသောနှိမ့်ချခံနေရဆဲဖြစ်ပါသည်။ သူဟာတိုးတက်စေနိုင်ကြောင်းဒေသများအပေါ်မှာငါ့ကသူ၏မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုထံမှအကြံဉာဏ်ကိုထွက် sorting ဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ သူ 21 နှစ်ပေါင်းအခါ 2008 ဒီဇင်ဘာလ 16 တွင်, သူကအီတလီထိပ်တန်းဌာနခွဲ၌သူ၏ပွဲဦးထွက်ရာ၌ခန့်ထားပြီမှစီးရီးအေ၏သမိုင်းအတွက်အဋ္ဌမအသက်အငယ်ဆုံးကစားသမားဖြစ်လာသူ့ရဲ့ပထမဆုံး-အသင်းပွဲဦးထွက်စေတော်မူ၏။
သို့သော်သူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုကြောင့်ဈ၏စီးရီးမှအချဉ်သွား၏2013 မှ 2015 အကြားသရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ njury-hit လှုပ်ရှားမှုများ။ ဤသည်ကိုထိရောက်စွာအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေရန်ပျက်ကွက်သည့်လက်ျာခြေမတခုတခုအပေါ်မှာမအောင်မြင်ခွဲစိတ်ရှိခြင်းပြီးနောက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ အခြားဒဏ်ရာမှတဆင့်ရှည်လျားမရှိခြင်း, သူ့ကလပ်တစ်ခုကာလပြီးနောက်မီလန်ကိုဝယ်ခြင်းငှါတစ်ခု option နဲ့အတူတစ်ရာသီကြာအငှားမိုနာကိုမှသူ့ကိုထွက်တင်ပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
ချေးငွေအပေါ်နေစဉ်, မိုနာကိုပုပ်သူ့ကိုကစားနှင့်သူ၏အမှုအဆိုးဆုံးဖြစ်လာသည်။ ထိုချေးငွေရာသီအတွင်း, Stephan သူ့ကိုဝယ်ဖို့ဖို့ခြွင်းချက်တာဝန်ကိုသက်ဝင်မိုနာကို၏ 1 ဂိမ်းတိုတောင်းခဲ့တဲ့အခြိနျမှာကစားသမားများထဲကအေးခဲတယ်။ စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်သူကသူတို့ချေးငွေသဘောတူညီချက်ကပိုအဆင်သင့်နှင့်အမြဲတမ်းဖြစ်သကဲ့သို့လျင်မြန်စွာရိုးမားမှသူ့ကိုထွက်ပစ္စည်းများကိုငှါးရမ်းပေးသည်သူကိုမီလန်ပြန်တင်ပို့ခဲ့ပါတယ်။ Stephan ah သွင်းယူသည့်အခါတစ်ဦးကအံ့ဖွယ်သညျ လာ.alf ငျးမွီးကောကျ backheel ရည်မှန်းချက် (အောက်တွင်ဗီဒီယို) flicked ရိုးမားများအတွက်အမြဲတမ်းဆက်ရှိနေရန်သူ၏သဘောတူညီချက်ဖန်ဆင်းသော။ ကြွင်းသောအရာ, သူတို့ပြောသကဲ့သို့ယခုသမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
Stephan El Shaarawy ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -relationship ဘဝ
တစ်ဦးကအစီရင်ခံစာ Stephan သူ့ရဲ့ကလေးဘဝရည်းစား, Ester Giordano နှင့်အတူကစားကွင်းအပေါ်သူ၏ဆကျဆံရေးစတင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကို bestie status ကိုမှသည်စစ်မှန်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာကသူတို့ကိုခေါ်သွားတယ်။ Stephan တစ်ချိန်က Ester ဘို့သူ့မေတ္တာကြေညာခြင်းနှင့်သူတို့လက်ထပ်ထားပေးပါ့မယ်ရနိုင်ယုံခဲ့သည့်မိမိအအစောဆုံးကလေးဘဝအမှတ်တရများ၏တဦးတည်းပြန်ပြောပြခဲ့သည်။
မိမိအပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအပြင်, Stephan El-Shaarawy သူ့ရည်းစားနဲ့အတူဘဝတစ်ဦး enjoyer ဖြစ်လူသိများသည်, Ester Giordano အဘယ်သူကိုသူအလေးအနက်ထားချိန်းတွေ့သည်။
Stephan El Shaarawy ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts-ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်
Stephan El Sharawy သည်သူ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဖို့အများကြီး attribute တွေရှိပါတယ်။ ချွတ်စတင်ခြင်း, ငါတို့ကသူ့ LifeBogger အဆင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံကိုတင်ပြ။
သူ့အကြိုက်ဆုံးဟင်း: Trofie အယ်လ် pesto - ပုံမှန် Genovese ပန်းကန်နှင့်တုံကြော်ဆန်။
သူ၏ခွန်အား: သူသည်သမဝါယမသံတမန်ရေး, လျောက်ပတ်, မျှတသောစိတ်, လူမှုရေးဖြစ်ပါတယ်။
သူ၏ အားနည်းချက်များကို: သူကွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်, ထိပ်တိုက်ရှောင်တစ်ဦးအာဃာတများနှင့် Self-သနားသယ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။
အဘယ်အရာကိုသူ likes: သူက (အောက်တွင်မြင်ကြနောက်တဖန်ကဲ့သို့) အခြားသူများနှင့်ဝေမျှနှင့်အိမ်ပြင်မှာပျော်စရာရှိခြင်း, Pre-ပွဲစဉ်ထုံးတမ်းရှိခြင်းနူးညံ့သိမ်မွေ့, အယူသည်းဖြစ်ခြင်း, (အောက်ကပုံတွင်တွေ့မြင်ကဲ့သို့) Flyboarding ချစ်တော်မူ၏။
အဘယ်အရာကိုသူနှစ်သက်မှုမရှိ: အားလုံးတစ်ခါတလေ Stephan အကြမ်းဖက်မှု, မတရားမှု, loudmouths, ညီနှစ်သက်မှုမရှိ။
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, Stephan တစ်ဦး, ငြိမ်းချမ်းသောတရားမျှတသောနှင့်တစ်ဦးတည်းဖြစ်ခြင်းကိုမုန်းသည်။ သူ့အဘို့မိတ်ဖက်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ Stephan အဆိုအရသူ့ကိုအမှန်တကယ်အရေးကြီးသောဖြစ်သင့်သောတစ်ခုတည်းသောအရာကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏သူ့ကိုယ်ပိုင်အတွင်း core နဲ့ Ester သူ့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူ၏။ သူဟာအခါတိုင်းတတ်နိုင်သမျှသည်သူ၏ငြိမ်းချမ်းရေးစောင့်ရှောက်နီးပါးပဋိပက္ခရှောင်ရှားဖို့ဘာမှလုပ်ဖို့အဆင်သင့်သူသည်တစ်စုံတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
Stephan El Shaarawy ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -မိသားစုဘဝ
Stephan တစ်ချိန်ကသူ၏ဖခင်, Sabri အယ်လ် Shaarawy အားဖြင့် operated တစ်လူလတ်တန်းစားမိသားစုနောက်ခံကနေလာပါတယ်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံနှစ်ဦးစလုံးမိဘများဟာသူတို့ရဲ့နှောင်းပိုင်းတွင် 30 ရဲ့စဉ်အတွင်းသူတို့သားသမီးရှိခြင်းစတင်ခဲ့သည်။
ဒါဟာသူ့အဖေပညာရေးနှင့်ဘောလုံးနှစ်ဦးစလုံး၏တစ်ဦးပေါင်းစပ်ခြင်းလိုချင်နေချိန်မှာ Stephan ရဲ့မိခင်လူစီယာ Shaarawy ကိုပိုမိုသူမ၏သား၏ထောက်ခံမှုရှိသူ၏ပညာရေးဆက်လက်ခဲ့ပါတယ်, ကလေးတစ်ဦးအဖြစ်ထိုနောက်ကျောကိုသတိပြုပါရန်ဆိုင်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
အစ်ကို: Stephan Manuel အယ်လ် Shaarawy အမည်ရှိဆိအစ်ကိုရှိပါတယ်။ အဲဒီအစားမိမိအကြီးတွေအစ်ကိုရဲ့ဥစ္စာဓနအပေါ်မြှောင်၏အောက်တွင်ပုံ Manuel တစ်ဦးဘောလုံးအေးဂျင့်ဖြစ်လာရန်သွားလေ၏။
အားလုံးကသူ့မိခင်လူစီယာမှကျေးဇူးတင်စကား။ 25 နှစ်ပေါင်းထက်လျော့နည်းမှာ, Manuel Shaarawy မွငျ့မွတျနှလုံး, မီလန်အီတလီနိုင်ငံကက်သလစ်တက္ကသိုလ်မှဘောဂဗေဒ၏ဌာနထံမှစျေးကွက်များနှင့် Business မဟာဗျူဟာအတွက်မာစတာဒီဂရီကိုင်ဆောင်သူဖြစ်လာသည်။ မိမိအပညာသင်နှစ်အတွေ့အကြုံကိုယခုသူ၏အစ်ကိုရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစီမံခန့်ခွဲခြင်း၌သူ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လယ်ကွင်းကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲဖြစ်သည်။
Stephan El Shaarawy ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts-မိမိအဆံပင်
ပြီးတာနဲ့အချိန်အပျေါမှာ, Stephan ရဲ့ပန်ကာ Aldo တစ်ချိန်ကပြောကြားခဲ့့သည်က ..."ကျနော့်ခြောက်နှစ်အရွယ်သားဥစ္စာများကဲ့သို့ဆံပင်လိုသည်။ သူသည်အဘယ်သို့ပြုရပါမည်နည်း "
"အဲဒီမှာလုပ်ဖို့တစ်ဦးတည်းသာအရာရဲ့သောငါ၏ဆံပင်ညှပ်သမားသူ့ကိုယူပဲ! Savona, မီလန်အတွက်တဦးတည်း, ဒီမှာရောမမွို့ရှိတဦးတည်းအတွက်တဦးတည်း "- ငါတကယ်သုံးရှိသည်။
Aldo ရဲ့သားကိုအောက်တွင်မြင်ကြအဖြစ် Stephan ရဲ့ဆံပင်ရှိခြင်းတက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
Stephan ရဲ့တုံ့ပြန်မှု ..."မကအရမ်းကြာမြင့်စွာမှာအားလုံး။ ဒါဟာခဲဒီနေ့ခေတ်ကလုပ်နေတာဘာမှလိုအပ်ပါသည်။ ငါတောင်ဖြီးဘူး။ ကိုယ့်က hairdryer နဲ့ထိုးနှက်ပေးဖယောင်းတစ်နည်းနည်းကိုသုံးပါ - မဟုတ်ဂျယ် - ရပျရပျ၌ကျင်းပရန်အချို့ hairspray နှင့်ကန့် "။
Stephan El Shaarawy ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts-မိမိအ Idol
Stephan El Shaarawy အရ ... ကျွန်မငယ်ရွယ်စဉ်အခါ "ငါကအမြဲ Kaka စောင့်ကြည့်ဖို့အသုံးပြု - သူအေစီမီလန်မှာအခါ။ သူကအစေးအပေါ်နဲ့ off နှစ်ဦးစလုံး, ငါ၏စံပြဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကအမြဲငါသူ့ကိုတွေ့ဆုံခဲ့ပင်မတိုင်မီကယ့်ကိုနှိမ့်ချ-to-မြေကြီးတပြင်အဖြစ်ကိုဖြတ်ပြီးလာကြ၏။ ထိုအခါငါသူ့ကိုကျွန်တော်အမေရိကရှိတစ်ဦးဖော်ရွေအတွက် Real Madrid အသင်းကစားနဲ့ကျွန်မစိတ်ကူးအဖြစ်သူအတိအကျအခါတဦးတည်းအချိန်ကိုသိရန်တယ် - ။ တစ်စိတ်ကူးဘောလုံးသမားဖြစ်ခြင်းမှတပါးအံ့သြဖွယ်လူတစ်ဦး "
Stephan El Shaarawy ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts-ခမည်းတော်ရဲ့မြေယာများကပယ်ချ
အစပိုင်းတွင်, Stephan အဆိုပါအဘို့ကစားရန်အရည်အချင်းပြည့်မီခဲ့သည် အဲဂုတ္တုပြည်၌အမျိုးသားရေးဘောလုံးအသင်းဒါပေမယ့်အားဖြင့်ငြင်းပယ်ခဲ့သည် ထို့နောက်-နည်းပြ ခေါင်းဆောင် Hassan Shehata သူကိုမသိဘဲ stကြောင်း ating "မတိုင်း အီဂျစ် နိုင်ငံခြားလိဂ်အဘို့ကစား "ဟုအဆိုပါအမျိုးသားဘက်များအတွက်ကစားရန်ငျြးပွညျ့မီ။
စိတ်ပျက်ဖွယ်, အယ်လ် Shaarawy ထို့နောက်အတူကစားစတင် အီတလီနိုင်ငံဦး-17 သူကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူဘယ်မှာအသင်း in နှစ်ဦးစလုံး 2009 ယူအီးအက်ဖ်အေဦး-17 ယူရို နှင့် 2009 ဖီဖာဦး-17 ကမ္ဘာ့ဖလား.
သမ္မာကျမ်းအမှန်တရားစစ်ဆေးပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Stephan El Sharawy ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိဖြစ်ရပ်မှန်ဖတ်နေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တွင် LifeBoggerကျနော်တို့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်ကြိုးစားကြသည်။ သင်ဤဆောင်းပါး၌တရားကိုကြည့်ရှုတော်မမူကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုကြည့်ရှုပါလျှင်, သင့်မှတ်ချက်ကိုနေရာကျေးဇူးပြုပြီးသို့မဟုတ် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ!။
Julia နိုဝင်ဘာ 19၊ 20184တွင် - 15 ည
Muy Buenos los Dato, pero creo Que se equivocaron en una အစိတ်အပိုင်း။ Sobre su novia, desde hace un တန်းတူက de años Que ya မျှ esta con အဲလာ။